Daawo: Dhacdo xanuun badan wiil yar oo xalay ay qeybo kamid ah muqdisho ay ku cuneen bahallo kadib markii,….. – Kismaayo24 News Agency
Daawo: Dhacdo xanuun badan wiil yar oo xalay ay qeybo kamid ah muqdisho ay ku cuneen bahallo kadib markii,…..
by Tifaftiraha K24 5th August 2017 5th August 2017 051
Xaafadda towfiiq ee dagmada yaaqshiid qeybo kamid ah waxaa xalay lagu arkay dhacdo murugo badan oo aad u xanuun badan.
Dhacdadaan ayaa waxa ay aheyd ka gadaal markii xaafaddaasi lagu arkay canug saqiir ah oo wadada lasoo dhigay.
Canuga yar ayaa waxaa lasoo dhex galiyay bac sida dadka xaafadda ay warbaahinta u sheegeen waxaana oogada jirkiisa ka muuqatay dab waxaana dadkii nala hadlay ay inoo sheegeen in canuga lasoo gubay ka hor inta aan wadada lasoo dhigin.
Canuga oo xili habeen saq dhexe ah lasoo dhigay laamiga ayaa waxaa halkaasi ku cunay eeyo baahan oo xaafada jooga waxaana saakay la arkay meydka canuga yar oo jirkiisa qeybo kamid ah ay bahalada cuneen.
Lama oga ilaa iyo hadda cida sidaan u gashay canugaan yar ha yeeshee dadka xaafadda ayaa arintaan ka muujiyay argagax xoogan waxaana ay dalbadeen in la baadi goobo dadka canuga yar ee saqiirka ah sidaan u galay.
Qaar kamid ah dadka xaafadda ayaa warbaahinta gudaha uga waramay waxii ay saakay xaafadda ku arkeen.
Sawirrada halkaan ka daawo
Akhriso: Galmudug oo dowladda federaalka ugu baaqday in deg deg ay u baarto dilka guddoomiyihii gobolka galgaduud
Wareegto: Ra’isul wasaare kheyre oo xil culus u magacaabay wariye C/qaadir Nadaara
Cabudwaaq :- Wafdi Salaadin oo uu hogaaminayo Suldan Garbacune oo Cadaado ku wajahan.
admin 7th September 2016
Amisom maxay ka tiri weerarki lagu qaday Deeganada Goosha ee Jubada hoose
admin 22nd July 2016 22nd July 2016
Madaxweynaha oo afur u sameeyay madaxda laamaha amniga qaranka
admin 9th July 2015 27th August 2015